Mampihena tsikelikely ny fanorana mankany ambany kibo | Bezzia
Susana godoy | | Mihena
El mampihena ny otra io dia iray amin'ireo fototra ahafahana manao very kibo. Mila manana faharetana kely fotsiny ianao ary maharitra, satria azontsika atao tsara izany ao an-trano. Raha amin'ity dingana ity isika dia mameno azy io amin'ny sakafo mahasalama sy fanatanjahan-tena kely isan'andro, dia hahazo vokatra mihoatra ny mahafinaritra isika.
Ny fihenan'ny fanorana dia misy tombony lehibe. Anisan'izany ny fanatsarana ny fivezivezena, eo amin'ny toerana izay manentana, ary koa ny fialan-tsasatry ny hozatra ary ny famotsorana ny adin-tsaina. Ny fahalalana an'io dia efa mihoatra ny faniriana mihinana. Aza adino ny tombony hafa ary ny dingana tsikelikely hahavita azy tsy misy fahasarotana.
1 Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fanorana?
2 Iza no afaka manotra fanorana?
3 Fanorana isaky ny dingana
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fanorana?
Massager anti-cellulite ...
Mazava ho azy fa ny valiny no ho tombony tsara indrindra. Momba ny fandehanana izany very io tavy nangonina, indrindra amin'ny faritra toy ny kibo. Noho ireo fanorana ireo sy ny fitsaboana ny hoditra dia ho afaka hamelona ilay faritra izahay ary hanafoana ny ranon-javatra betsaka tazomin'ny vatana. Vokatr'izany dia azonao atao koa esory ny cellulite ary mampihetsika fanatsarana ny fivezivezena. Raha mifantoka amin'ny faritra misy ny kibo na kibo ary andilana isika dia hatsaraina koa ny fifindran'ny vavony.
Iza no afaka manotra fanorana?
Amin'ny ankapobeny, izay salama salama dia afaka manao izany karazana fanorana. Mazava ho azy fa tsy tsara ho an'ireo vehivavy bevohoka izy ireo. Izy ireo koa dia tokony hialana amin'ny olona izay manana karazana olana amin'ny faritra voa na vavony. Toy ny ankamaroan'ireny fanao ireny, raha manana tosidra ianao, dia tsara kokoa ny manatona ny dokotera. Tadidio fa ny fotoana tsara indrindra hanaovana azy dia mety rehefa mifoha ianao na alohan'ny hatory, rehefa tsy misy dikany ny vavony.
Fanorana isaky ny dingana
Rehefa avy nahalala bebe kokoa momba ny tombony azo avy amin'ireo fanorana ireo ary iza no mahavita azy ireo, miroso amin'ny fanaovana otra isika.
Ny iray amin'ireo safidy dia mividiana massager miaraka amin'ny loha izay manamora ny fihenan'ny tavy sy cellulite fa raha tianao ny manao azy amin'ny tanana, dia izao no dingana manaraka:
Mandry eo an-damosinay aloha izahay, izay ahazoanao aina indrindra.
Amin'ny rantsan-tànantsika no hanombohantsika ny fanorana ao amin'ny faritry ny kibo. Azonao atao ny manisy «moisturizer» kely mba hampandeha be ny hetsika.
Hanisy tsindry kely isika, nefa tsy hanelingelina azy, ary hanomboka amin'ny fanorana. Homenao araka ny filaharan'ny famantaranandro.
Hanomboka malefaka be izahay manerana ny faritra ary hihamafy tsikelikely. Miala sasatra mandritra ny segondra vitsy izahay ary mamerina.
Azonao atao ny manelingelina ny fanerena kely amin'ny knuckles-nao. Aza soratana amin'ny hoditra.
Ho an'ny faritry ny valahana, maninjitra ny tanantsika isika ary hiakatra sy hidina amin'ity toerana ity. Averina indray, manao an'io tsindry kely io.
Izahay dia hitondra a miaina milamina mandritra ny fizotrany. Mety haharitra 20 minitra eo ho eo ny fanorana ary hanao roa andro isan'andro izahay.
Ho an'ny vokatra lehibe kokoa, afaka manampy ny tenanao amin'ny fihenan'ny menaka ianao (inona no azonao vidiana eto). Raha aleonao manao azy, amin'ny menaka oliva vera, ampio ny ranom-boasarimakirana antsasaky ny diloilo rosemary vitsivitsy. Afangaroy tsara dia hanana crème tonga lafatra ho an'ny otrao ianao. Etsy ankilany, azonao atao koa ny manampy ny tenanao amin'ny menaka eucalyptus izay hamela anao hanana fahatsapana fiadanam-po sy fahasalamana.
Mazava ho azy, araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, tsy zavatra mahagaga izany. Mila faharetana kely fotsiny dia tsy maintsy ampiarahina amin'ny sakafo. Raiso fotsiny sakafo ambany tavy, misotroa rano be dia be ary ampitomboy ny sakafo toy ny legioma sy voankazo. Hotsipintsika ny siramamy mba handeha any amin'ny sakafo misy fibre betsaka kokoa. Amin'ny fampiraisana ireo rehetra ireo dia ho tratranay fa ireo fanorana mampihena ireo dia mahazo fahombiazana faran'izay betsaka. Efa nanandrana an'ity teknika ity ve ianao? Nisy vokany ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Mihena » Ahoana ny fomba hanatsarana fanorana tsara tsikelikely
Gleidy Margarita Croussett dia hoy izy:
toro-hevitra tena tsara, ankoatry ny fanampiana mampihena sy mifangaro ny menaka
Valiny tamin'i Gleidy Margarita Croussett
Kaopy sy sôkôla fanosotra cookie Oreo